BNI Mobile Banking 2.2.0 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 2.2.0 လွန်ခဲ့သော 1 လက
Application များ ငွေရေးကြေးရေး BNI Mobile Banking
BNI Mobile Banking ၏ ဖော်ပြချက်
BNI Mobile Banking အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
BNI Mobile Banking အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
BNI Mobile Banking အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
BNI Mobile Banking အား အချက်ပြပါ
tjinhasan စတိုး 3.57k 776.34k
BNI Mobile Banking နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း BNI Mobile Banking အချက်အလက်
ထုတျလုပျသူ PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ https://ibank.bni.co.id/corp/HTML/tnc-EN.html
Release date: 2018-11-30 23:58:37
လကျမှတျ SHA1: 7E:98:D6:58:64:98:19:E0:3A:E0:BF:EB:4E:50:35:B9:30:F2:30:7C
ထုတျလုပျသူ (CN): BNI
အဖှဲ့အစညျး (O): PT. Bank Negara Indonesia
နယျမွေ (L): Jakarta
ပွညျနယျ/မွို့တျော (ST): Java
BNI Mobile Banking APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ